Ny Rosiana Misompatra Ny Angano Tianareo. (LOL.) · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 02 Febroary 2017 1:32 GMT
Sary: vondrom-piarhamonina Facebook “Sary mahatsikaiky sy Mpankafy”
Misy sary mahatsikaiky iray vaovao ao amin'ny aterineto ao Rosia, ary azo inoana fa tsy ho tianao izany. Farafahakeliny antony roa no tsy hitiavanao io sary mahatsikaiky vaovao io: mila fahaizana miteny tenim-pirenena roa vao mahazo azy, ary masira toy ny fitenin'ny tantsambo izany.
Nefa raha mahafehy ny teny Rosiana sy Anglisy ianao, ary tsy mampaninona anao ny teny ratsy kely, azo antoka fa ho tia ity sary mahatsikaiky vaovao ity ianao, izay tsy mbola manana ny tena anarany aloha, fa toa vao nipoitra tamin'ny herinandro lasa.
Toy izao ilay sary mahatsikaiky vaovao : angano naverina notantaraina an-tsary ary ampiarahana amin'ny tenimboto Anglisy sy Rosiana mifangaro. Raha manontany tena ianao hoe ahoana ny fandehan'izany, afantohy amin'ity ohatra ambany ity ny masonao:
Sary: vondrom-piarahamonina “Degradach” Vkontakte
Ao amin'ity fitantarana “Ny Amboadia sy ireo Osy Tanora Fito” — tantara izay amin'ny ankapobeny mampitambatra ny singan'ny “Ireo Kisoa Kely Telo” sy “Ilaikely Misatroka Mena” — miresaka amin'ny osy toy ny “kozlatkis” ilay amboadia – ampiana “s” amin'ny teny anglisy mba hidika hoe maromaro izay efa midika hoe maromaro rahateo amin'ny teny Rosiana ” kozlyatki.” Rehefa tsy mety mino ireo osy fa ny reniny io, dia nataony hoe:” heverinay fa reny ne nasha ianao”, midika hoe”tsy reninay”. Tatỳ aoriana, hazavain'izy ireo hoe, satria ianao maneno toy ny spidozniy sobaka,” izay midika hoe “tahaka ny alika mitondra ny tsimokaretina SIDA.”
Niato avy eo ilay amboadia ary nihiaka, “ahueli tam ve ianareo e ?” izay midika hoe “fa ianareo ve efa tena adala lelikeeee?!” Namaly ireo osy avy eo, “Mandehana mandeha faty any, tupoi volchara” niantso azy ho “adala tia tena”, ny “volchara” dia tenin-jatovo amin'ny teny Rosiana ampiasaina amin'ny aterineto andikàna ny amboadia, “volk”. Farany, niteny tamin'ny tenany ny amboadia hoe: “Jesosy o!, inona no tsy mety amin”ity rebatishki ity? Midika hoe inona àry no tsy milamina amin'ireo bandikely ireo?
Betsaka fanamboarana maro hafa momba ity sary mahatsikaiky ity niseho tamin'ny herinandro tao amin'ny “Degradach“, vondrom-piarahamonina Vkontakte , izay manakaiky ny dikan'ny famaritana ny “Fantson'ny Fahasimban'ny “. Fantatra koa amin'ny hoe ny “Aoka Hotantaraiko”, tantanan'ny lehilahy iray miantso ny tenany hoe “Babai Velikolepnyi” (“Bogeyman ilay Mahatsikaiky”) ilay vondrom-piarahamonina, tovolahy iray eo amin'ny 20 taona mahery izay mitantana Fantsona YouTube iray manana mpamandrika maherin'ny 25.000 ary nahasarika mpijery maherin'ny 1,3 tapitrisa.
Maro amin'ny lahatsarin'i Babai, toy ny maro amin'ireo angano sy sarimiaina mampihomehy navoaka tao amin'ny Vkontakte, dia fakonà aterineto madiodio – ny karazana fankahalàna sy vazivazy mahery setra izay nahazo ny daka tamin'ny fampisehoana “Million Dollar Extreme” nivoaka ny Adult Swim taorian'ny andiany iray monja.
Amin'ireo vazivaziny rehetra, anefa, raisin'i Babai ho tena matotra ny asany. Tamin'ny Alatsinainy, dia nanoratra tao amin'ny Vkontakte izy, mitaraina momba ny fomba nangalaran'ireo Rosiana mpisera amin'ny aterineto ny sarisary mahatsikaikiny amin'ny fitenim-pirenena roa, nampifanarahany tamin'ny fomba izay lazainy fa ambanin'ny kalitaon'ny vazivaziny.
Ity misy dika iray amin'ilay sary mahatsikaiky izay tsy nahavita nampiaiky volana azy:
Ao amin'ity fitantarana an'i Cendrillon ity, miresaka aminy toy ny “Zopupka” ilay renikely ratsy fanahy, mandiso ny fanononana ny anarany Rosiana, Zolushka, izay namaly, “Blyad’ you starya. Tolchok posle tebya washing” – “Ilay vavianti-doza ity. Izaho no manasa ny trano fidiovana rehefa avy [nampiasainao]” hoy avy eo ilay renikely hoe: ..”Mmne pohuy iza no anaranao. Ya sy moi zanaka vavy mandeha na vpison na hatu ny Mpanjaka,” izay midika hoe:”Tsy misy irarahiako izay anaranao any. Izaho sy ny zanako vavy handeha hamonjy fety any an-tranon'ny mpanjaka. Nampiany avy eo hoe “Diovy ny zamok, chto anay, mba hazava sy hamirapiratra toy ny diamondra”, midika hoe” diovy ny lapanay, mba hazava sy hamirapiratra toy ny diamondra” . Namaly i Cendrillon hoe:” ilay alikavavy tuporulaya ‘ty, Izaho koa mila buhnut sy ebat'sya miaraka amin'ny Printsy”, izay midika hoe “ilay alika vavy marikoriko ity, izaho koa mba te-hiara-handry amin'ny printsy.” Hoy ilay renikely avy eo: “Huins! izahay popizdovali, a tu zhopoy nyuhaesh ‘voninkazo. Azaza,” izay midika hoe: “Hagaigena izao! izahay manao mihevotrevotra tsara ary ianao hioroka voninkazo any amin'ny vodinao. AHAHA.” Hoy i Cendrillon avy eo hoe: “Blyat” gde moya bebe” – “Lelikeeee! Aiza ary ny bebeako?
Avy eo izahay tsaraina amin'ny endrika ivelany amin'ny hoe ‘Matavy aho, Ndao hifety’ Sakan'ny Aterineto, izay vao haingana no nateraka indray tao amin'ny RuNet toy ny “Vzhukh” – saka majika izay manatanteraka ny faniriana amim-pihambahambàna fatratra. (Ny teny hoe “vzhukh” dia natao mba hisamborana ny feon'ny tsorakazo majika izay mifiofio manodidina.)
Avy eo mipoitra miaraka amin'ilay akanjony tsara tarehy fitondra amin'ny hariva i Cendrillon, ka nanao hoe: “AZAZAZA. Naebala old pizdu”, midika hoe “AHAHAHA Ankehitriny efa voafitako ilay vavianti-doza ity”. Avy eo izy nanampy hoe, “Mila manary ilay tufel'ka sy ilay dat'yobucha ary miaina miaraka amin'ny printsy,” izay midika hoe, “Ilaiko ariana ilay kiraro keliko dia mba miara-mandry sy miaina miaraka amin'ny printsy.”
“Zatra manantena aho fa ny fomba vaovao fanaovana sary mahatsikaiky [izay antsoin'i Babai hoe asany an-tserasera] no ho antony mampitombo ny votoaty ao amin'ny Vkontakte. Fa ankehitriny, hitako fa tsy hisy zavatra handeha […] Raha mihevitra izy ireo fa Vzhukh no faratampon'ny vazivazy maoderina, dia tsy misy na inona na inona azoko atao ho an'ireo olona ireo, “hoy ny nosoratan'i Babai, manameloka ny fihanaky ny sary tena mahatsikaiky noforoniny.